Miisaaniyadda fog ee ururka Midowga Yurub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xubnaha baarlamanka EU-da oo ku hanjabay iney Veto saaraan qorshaha miisaaniyadda fog ee ururka
Miisaaniyadda fog ee ururka Midowga Yurub
La daabacay fredag 8 mars 2013 kl 13.21
Baarlamanka ururka midowga Yurub ayaa ku goodiyay inuu maya saari doono qorshaha miisaaniyadda ururka haddii aan muhiimadda lagu saarin arrimmaha la xiriira tacliinta iyo cilmi-baarista. Go'aankan ayaana ah baaq ka soo yeeray is-baheeysiga ugu baaxadda weyn ee mudaneyaasha baarlamanka ee ururka EU-da.
Muddo iminka bil laga joogo ayey madaxda 27-ka dal ee xubnaha ka ah ururku ku heshiiyeen miisaaniyadda ururka ee mustaqbalka, illaa iyo sannadka 2020. Halka ay dhanka kale xubnaha baarlamanka awood iminka u leeyihiin iney saaraan codka diidmada ee Veto-owga miisaaniyadda mustaqbalka fog, sida uu u ogolaanayo heshiiska Lisabon. Iyadoona ey shan garab ee ka tirsan xubnaha baarlamanka, oo tiradoodu gaareyso 85% ee mudaneyaasha baarlamanku sheegeen iney diidmo kala hor iman doonaan haddii loo soo hor-dhigo sida uu hadda u qoran yahay.
Halka dhanka kale ey xil-dhibaannadu aaney waxba ka qabin in la dhimo miisaaniyadda lagu bixiyo taageerada beeraleyda Yurub, sida uu sheegay, Göran Färm, ahna xil-dhibaanka u qaabilsan arrimmaha miisaaniyadda xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ee baarlamanka EU-da.
- Waxaan qabaa in xoogaa la dhimo miisaaniyadda taageerada ee beeraleyda. Sannadihii ugu dambeeyey ayeyba nagu adkeeyd sidii aan u dhameeys-tiri laheyn miisaaniyadda bixinteeda. Dhaqaale ayaa halkaa ku sugan laga isticmaali kari lahaa.
Baarlamanka ayaa iminka bilaabaya wada-haddalladii la xiriirey miisaaniyadda iyadoona go'aanka kama dambeeysta la fileyo ugu horeeyn bisha maajo, hase yeeshee laga yaabo xilliga kuleeylaha ee foodda innagu soo haya.
Haddii ey xubnaha baarlamanka EU-du iska laadaan qorsha miisaaniyadda ayay halkiisa ka socon doontaa miisaaniyadda sannadka 2013. Middaasina oo macnaheedu tahay in dalkani aannu heli doonin dhimistii miisaaniyadda ee la go'aansadey.